ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင် ပြောပြီ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင် ပြောပြီ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင် ပြောပြီ။
Posted by က္ိုကိုအိုဗာ on Jun 15, 2012 in Copy/Paste | 22 comments
ရိုဟင်ဂျာများများကို ဘင်္ဂလီ စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ Jamaat-e-Islam က လက်နက်များ တပ်ဆင်ပေးကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင် ပြောပြီ။
ဘင်္ဂလီ ဘာသာရေး အစွန်းရောက် စစ်သွေးကြွ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Jamaat-e-Islam က ရိုဟင်ဂျာတွေကို လက်နက်တွေ တပ်ဆင်ပေးနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခနဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားအောင် လှုံ့ဆော်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Dipu Moni ကိုယ်တိုင်က ပါလီမန်မှာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါပြီ။ ဒီသတင်းကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ထိပ်တန်း သတင်းဌာနကြီးဖြစ်တဲ့ Bangla News 24 မှာ သတင်းဖော်ပြထားတာပါ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော် ပြောဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ကိုယ့်နယ်မြေထဲမှာ တနာရီတောင်မထားသင့်ဘူး..ဟေ့
အဲဒီ ဝဘ်ပေ့ချ်ကို ဓာတ်ပုံလုပ်ပြီး
သတင်းကို သတင်းလို ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပြန်ရှယ်မယ်ဗျို့
အရိပ်နေနေ အခက်ချိုးချိုး ကိုနေကိုတိုးကောင်တွေ..
ခင်ဗျားတို ့ချစ်နေရင်ပြော..ကျုပ်ကိုယ်တိုင် ခင်ဗျားတို ့အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ပေးမယ်..
သူရို့ လဲ ကျိမ်းနေမှာဘဲလေ
မဟုတ်ကြောင်း ပြောတာ နောက်တောင်ကြပါရဲ့
ကဲရှင်းကြပြီလား BBC VOA DVB တို့ရေ။ ဘာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို မျိုးသုန်းသတ်ဖြတ်ချေမှုန်းမှု့ ဟုတ်စ။ ပြောကြအုံးလေ BBC VOA DVB တို့ရေ။ ဒီသတင်းလေးလဲ နင်တို့ဆီမှာလွှင့်ပေးကြအုံးပါ့မလား။
ဟုတ်တယ်ပြောစမ်းပါ အစ်မရာ…. ဒီကောင်တွေ တဖက်နားပေါက်တွေ ပါ လို……..နောာာာာာာ
ရခိုင် အရေး နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ကျနော် တို့ တိုင်း ပြည် ကို ပေါက်တတ်ကရ ပြော နေတဲ့ သတင် ဌာန တွေ ကို ပို့ တတ်ရင် ပို့ ပေး ကြ ပါ ဗျာ။ BBC email address သိရင် share လိုက် ကြ၊ ဝိုင်း ပို့ လို့ ရအောင်။
ကဲ ဘာပြောအုံးမလဲ…. ကြည့်ကြသေးတာပေါ့…
တကယ်စစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပါဝင်ဖို့ အသင့်ပါဘဲ
BBC ကိုအယုံအကြည်မရှိလို့ နားမထောင်တာကြာပေါ့။
ကောင်းပါ၏ အဲဒီသတင်း ကမ္ဘာအနှံ့ ပျံ့စေသော်။
ကဲ .. မင်းတို့အမျိုးတွေကတောင် ပြောနေကုန်ပြီး ဘာပြောထပ်ပြောချင်သေးလဲ။
အို..ဘာဒဲ့..။ ဟဲ့…ဘာဒဲ့..။ အို..ဘာဒဲ့..။ ဟ..ဘာဒဲ့..။ ဟို..ဥပဒေဆရာ..ဘာဒဲ့..။ BBC..ဘာဒဲ့..။ ဟိုဟာ..ဒီဟာတွေ..ဘာဒဲ့..။ ဟေ..ဘာဒဲ့..။
အဲ..အဲ..မေ့လို့။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကနေ ကိုကိုအိုဗာအထိ အားလုံး အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။
kala mone says:
ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာ ရခိုင်၊ကုလား၊ဘုန်းကြီးတွဲပြီး ဗလီစောင့်နေကြတယ်။ငါတော့မျက်စိလည်သွားပြီ။
ဘင်းဂလားဒေ့ရှ်နဲ ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ ့နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေး ဆင်နွှဲရင် ပိုကောင်းမည်။
ကဲဒီမှာလဲ သတင်းတခု.. ဘွားတော် အောင်နိုင်ရေးအတွက် ၁၉၉ဝထဲက သူတို့တွေဝိုင်းဝန်းထောက် မပေးခဲ့ကြတယ်ဆိုဘဲ။ ပြောတာက ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်လေ..အစိုးရလုပ်တာတွေ နေရာတ ကာထောက်ပြနေကျ ဘွားတော်တယောက် ဒီကုလားတွေအတွက်ကျမှ ကြောက်ချီးပါနေလို့ ဘာလို့များလဲမှတ်တယ်…
khin thun says:
all are basteds